Nzira dzekubatanidzwa - Hinds Feet Farm
Hinds 'Feet Farm iri GARA ichikura uye inoda rutsigiro rwako - nguva yako, matarenda ako uye zvipo zvako zvemari kuti uenderere mberi nekupa uye kukura zvirongwa zvedu zvakasarudzika uye zvitsva zvevanhu vanorarama nekukuvara kwehuropi. Ndokumbira ufunge kutsigira Hind's Feet Farms nemari kana kuburikidza nekuzvipira.
Mwoyo yakawanda ine rupo uye ine hanya iri kuvaka Hinds 'Feet Farm. Mune zvimiro zvevanhu, makambani, nheyo, sevhisi uye mapoka evagari, rupo rwavo rwakaungana kuve nechokwadi chehupenyu hwevanopona vakakuvara muuropi. Zvipo zvako zvekushandisa mari uye mapurojekiti makuru anotariswa nekuchenjera kuti awedzere bhenefiti yazvo yakakwana kuitira kuti dhora rega rega riverenge. Uye, dhora rega rega rinoverengera.
Kungave kuri kupihwa kamwe chete kana kudhirowa kunodzokororwa mupiro wako unobviswa mutero we100%.
Funga kusanganisira Hinds 'Feet Farm muzvirongwa zvako zveimba. Kuburikidza nekupa kwakarongwa kunobudirira, unokwanisa kudzikamisa zvinangwa zvako pachako nezvido zvako zvekubatsira panguva imwe chete. Kugadzira chipo chakarongwa kuHinds' Feet Farm kunovimbisa kuti rubatsiro rwako ruchaita kuti purazi irambe ichipa zvirongwa kune vanhu vakuru vane kukuvara kwehuropi mudunhu reNorth Carolina.
Nzira iri nyore uye inoshanda yevana yekubatsira kuunganidza mari yemabhiza edu. Hazvina mhosva kuti mupiro wakakura sei kana kuti muduku sei, peni rega rega rinokosha! Iyi inzira yakanaka yezvikoro, makirabhu, machechi nemapoka madiki kuti vadzidzi vavo vabatanidzwe mukuunganidza mari yesangano renzvimbo. Dzidza ZVIMWE.
Une zano rekubatsira kuunganidza mari yepurazi here? Zviitiko hazvingobatsire kukwidza mari yepurazi, asi zvakare zvinobvumira mukana wekugadzira ruzivo rweHinds 'Feet Farm. Zvakare, kubata Facebook fundraiser inzira huru uye iri nyore yekushandisa social media uye kukwidza mari.
Chiitiko chedu chitsva chekusaina papurazi! Joinha isu Chivabvu wega wega wezuva risingakanganwike uye rinonakidza uchiona iyo Kentucky Derby! Hapana imwe nzira iri nani yekushandisa Mugovera wekutanga waMay pane kupfeka chipfeko chako chekuona uye kuratidza heti yako yakanaka! Matikiti ari kutengeswa Kukadzi wega wega - funga kutitsigira nekupa kune yedu yakanyarara auction kana kuva mutsigiri. Dzidza ZVIMWE.
Batsira kuti mupiro wako uenderere mberi! Makambani mazhinji anokurudzira vashandi vavo kuti vape kune vavanoda rubatsiro uye mukudzoka vanozoenderana nemupiro. Kana kambani yako iine sarudzo iyi, ingotora fomu rechipo rinoenderana kubva kuhofisi yako yeHR uye isu tichabatsira kuita zvimwe!
Vazvipiri vedu vanoita basa rinokosha papurazi. Kunyangwe iwe uchida kubatsira nechirongwa chedu chezuva kana kuda kudyisa mabhiza, tinoda rubatsiro rwako! Ingo svika kuhofisi yedu uye tichakuisa iwe kuti ubatane nemunhu akakodzera. Vazvipiri vakakosha uye isu hatigone kuzviita pasina iwe! Dzidza ZVIMWE.
Kupinda musangano here? Kuronga chimwe chinhu kuchechi kwako kana boka revakadzi? Tizivise! Tinoda kubatanidzwa uye kukupa chibvumirano chekushambadzira nezveHinds' Feet Farm yekugovera.
Funga nezvekupa zvinhu zvatingashandisa papurazi. (kureva zvitambi, makadhi egasi, makadhi echipo eHofisi Depot, bepa rekukopa, ingi, makadhi ezvipo). Mupiro wako wezvinhu izvi haungotibatsiri chete, asi unotibvumira kushandisa mari yakagoverwa kuti zvinhu izvi zvishandiswe kune zvimwe zvinhu.